Firefox 87: muongorori wayo anotibvumidza kuti tishandure pakati pechiedza nemamiriro erima | Linux Vakapindwa muropa
Firefox 87 inowedzera sarudzo kune wayo muongorori iyo inotibvumidza kuti tishandure pakati pechiedza uye nerima modhi kana iyo webhu ichiibvumira.
Kuita bvunzo dzekutanga ndakafunga kuti "hum ... vatokanganwa nezvevashandisi veLinux", asi kwete. Iyo poindi ndeyekuti Firefox 87 yakauya nerutsva iyo yanga isati yataurwa mune rondedzero yeshanduko, asi nekuti icho chinhu chakanyanya kutarisirwa vatadzi, kunyange chiri chimwe chinhu chatinogona kushandisa pasina njodzi kubva kuna iye muongorori. Chinhu chakashata kana tichida kuchishandisa kazhinji ndechekuti hazvishande kana tikapfiga sarudzo kuti tiongorore.
Ruzivo rwandiri kutaura nezvarwo runotibvumidza chinja pakati pemwenje uye nerima modhi emapeji ewebhu. Izvo zvakakosha kuti utaure kuti zvinongoshanda chete pamapeji ewebhu ane ese ma modhi anowanikwa uye akamisikidzwa uye kuti, semuenzaniso, isu hatigone kuishandisa kuona rima vhezheni iyo Google iri kushandira iyo yayo yekutsvaga injini, nekuda kwekuti haina kuvhurwa . Kune rimwe divi, kana webhusaiti ikasanganisira sarudzo pasi pebhatani kana switch, sezvazviri neblog iri nezve Apple 9to5mac, hazvishande kana.
Firefox 87 inotibvumira kusarudza pakati pezuva neusiku
Kuti tiongorore basa iri isu tinofanirwa kungotinya pane peji rewebhu, vhura Inspector uye tinya pane zuva kana mwedzi. Pakati pemapeji anozivikanwa ekushanda tine injini yekutsvaga DuckDuckGo, izvo zve MacRumors, izvo zve Tanga Peji kana YouTube. Mune zvimwe zviitiko tinogona kana kupinda mukati tobva taisa rima tema kana tasarudza mwedzi. Chinhu chakashata, sezvatataura, ndechekuti kana tikavhara muongorori zvese zvinodzokera kuchinyakare. Imwe mhinduro, kana kuti ndoda kugadzirisa, kutsvedza checker kuti igare pasi sebhawa.
Firefox 87 akasvika nezuro game nhau dzine chekuita nekuchengetedza uye kusavapo kwakakosha, uko kwekutsigirwa kweAVIF mufananidzo dhizaidhi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Firefox 87 inowedzera sarudzo kune wayo muongorori iyo inotibvumidza kuti tishandure pakati pechiedza uye nerima modhi kana iyo webhu ichiibvumira.